Dalku wuxuu u baahan yahay Qorshe Siyaasadeed iyo mid Maamul oo isbedel doon ah (Political Reforms) . Qalinkii A/rahman fidhinle UK.
Thursday, 08 December 2016 06:52
Qaranka Somaliland waxaa hor yaala Mushkilado badan oo caadi u noqotay in Shacabka reer Somaliland ay la noolaadaan,lana daalaadhacaan maalin iyo habeenba,
Mushkiladahaa waxaa ka mid ah Qabyaaladii oo bacrimtay oo dulaca furatay sidii loo furdaamin lahaa. maal-urursi iyo musuq-maasuq baahsan sidii loo xakameyn lahaa,
ku tagri fal hantidii maguuraanka aheynd ee ummadda sidii loo soo celin lahaa iyo Cabudhin iyo Cadaalad daro aan geed loogu soo gaban. Sidaa daraadeed wuxuu qaranka JSL uu deg-deg ugu baahan yahay Qorshe Hawleedyadan hoose ee ka duulaaya Sawirka guud ee JSL hada ka muuqda :
1- Waxaa loo baahan yahay in qorshe cad la sameeyo si loo helo qaran ka nadiifa qabyaalad, qaraabo kiil iyo musuq-maasuq, qorshahaas oo ilaalin doona xoriyada aas-aasiga ah iyo xuquuqul insaanka iyada oo la ixtiraamayo heshiisyada caalamiga ah.( Universal declaration of Human rights )
2- Waxaa loo baahan yahay qaran suga midnimada dadka iyo dalka si shacabka JSL ay sife cadaalad ah ugu wadaagaan yuhuunta dalka, anfaca, mansabka, maganta, moorada, muquunada, kheyraadka dabiiciga ah iyo illaha dhaqaalaha ee dalka oo hada dhinac u ciiray.
3- Si bulsho weynta reer Somaliland isu aaminto waxaa dalku u baahnay yahay Qorshe cad oo ku saleysan in beelaha darafyada gaar ahaan Sool iyo Sanaag bari tabashooyinkooda la soo af-jaro , loona helo xal-waara taa soo loo baahan yahay in lala yimaado qorshe hufan oo ku dhisan wax-wada lahaansho iyo wada-tashi joogto ah.
4- Dalku wuxuu u baahan yahay isbedel Siyaasadeed iyo mid-Maamul oo mug leh. wuxuu u baahan yahay dhisme dawladeed oo aan daboolneyn ee daah-furan kaas oo ku saleysan cadaalad, wada-tashi iyo dhaqankii awoowyaasheen , qorshahaas oo ummadda JSL gaadhsiindoona cadaalad waarta , barwaaqo iyo adeeg hufan.
5- Dalku wuxuu ubaahanyahay Qorshe ku saleysan Tayeyn iyo daryeeladii arimaha bulshada sida Caafimaadka, Degaanka, Waxbarashada, Wadooyinka, shaqaalaha, Garsoorka, koboc dhaqan dhaqaale iyo shaqo abuur oo joogto ah.
6- Dalku wuxuu u baahan yahay Qorshe hawleed higsigiisu yahay xoojinta midnimada mujtamaca JSL iyada base iyo balaysinba looga dhigaayo Siyaasad ku saleysan Saami qaybsiga Kuraasta sar sare ee duxda iyo iidaanka leh. sida kuwa Goleyaasha dawlada sida Golaha Baarlamaanka, Golaha Guurtida iyo Golaha fulinta.
7- Dalku wuxuu u baahan yahay qorshaha xoojinta qaranimada JSL si loo furdaamiyo caqabadaha hor taagan aqoonsiga iyo ictiraafka Jamhuuriyada Somaliland.
8- Dalku wuxuu u baahan yahay Qorshe cusub oo lagu xoojinaayo 3-da Ciidan qaran ee JSL iyada oo lagu xoojinaayo agab cusub iyo Tababaro loo furo cidammada kala duwan iyo dhamaan ardayda dhameysata Dugsiyada sare.sare ee dalka oo dhan ( National Services )
9- Dalku wuxuu u baahan yahay Qorshe cusub oo ku jihaysan sifihii shacabku uga haqab beeli lahaayeen Biyo nadiif ah, maadama xukuumada jirtaa ku fashilantay.
10-Dalku wuxuu u baahan yahay Misaaniyad mug leh oo ka turjumaysa baahiyaha aas-aasiga ah ee dalka taas oo ah mid runta odorosta oo yeelata Tashiil, Taxliil iyo turuq.
11- Dalku wuxuu u baahan yahay Qorshaha Dhalinyarada maadaama mujtamaca JSL 70% ay yihiin dhalinyaro sidii xoogaa dihin ee dhalinyarada looga faa'ideysan lahaa
12- Dalku wuxuu u baahan yahay inuu yeesho Qorshaha kobcinta Dimuqraadiyada JSL ,taas oo hada ay ku dhacday hagrasho badan, hakad joogto ah iyo hadimooyin badni.
13- Waxaa dalku u baahan yahay in qorshe dhaxal gal ah loo sameeyo Abaaraha baahsan ee dalka ku soo noq-noqonaaya si loo badbaadiyo reer guuraaga naf iyo maalba.
Waxaynu ubaahanahay Hogaamiye liqsiiya oo ku xasiliya shacabka JSL Qorsheyaashan sare iyo barnaamijyada siyaasadeed ee uu ku odorosaayo si uu wadanka ugu maamulo oo uu cod iyo cuudba shacabka ugaga doonto kagana iibsado. Waxaynu u baahanay Hogaamiye kala yaqaan qosynimada iyo qaranimada oo ka reeban qabyaalad, qaraabo kiil iyo isxulafaysi. Waxaynu u baahanahay Hogaamiye aaminsan kefeda miisaanka iyo midnimo qaran.
Guntii iyo Gebadii : Waxaan aad ugu hambalyeynayaa in Xisbiga buuxin kara, kana midho dhalin kara Qorsheyaashan sare uu yahay Xisbiga Wadani.
Waxaan ku soo Garoocayaa : Gobonimo Dadkaa Mudan- Galadana Rabaa iska leh !!
More in this category: « KUMUU AHAA PROF: MAXAMED CABDI BADE XISAABIYIHII HORE EE QARANKA SOMALILAND MAXAASE LAGU XASUUSAN DOONA Somaliland Ma Waxay Raacday Geeridii Marxuum Maxamad Ibraahim Cigaal? »